सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न गएको टाेली शिखरमा
काठमाडौँ । सगरमाथाको उचाइ मापन गर्न गएको नापी विभागको प्राविधिक कर्मचारीको टोलीले आज बिहान ३ः०० बजे शिखरको आरोहण गरेको छ । विस्तृतमा
विद्यापीठको जग्गा बेच्ने महन्तलाई थुनामा राख्न आदेश
ठूलो परिमाणको नक्कली नोटसहित पूर्वमन्त्रीको छोरा फेरि पक्राउ
बसाइँसराइका कारण विद्यालय सुनसान, गाउँमा जन्ती र मलामीकाे अभाव
मकवानपुरको सिस्नेरीमा बोलेर दुर्घटना, एक भारतीयको मृत्यु
टोखामा एक पुरुषको शव भेटियाे, हत्याको भएको हुनसक्ने आशंका
नक्कली सुन देखाएर ठगी गर्ने तीन जना पक्राउ
काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक किलोग्राम नक्कली सुन देखाई ठगी गर्ने तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
अब गाईले पनि पाउने भयो, ‘सुत्केरी भत्ता’ !
चितवन । रत्ननगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट गाईलाई सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम शुरु गरेको छ । नगरपालिकाको पशुपक्षी शाखाका प्रमुख शालिग्राम पौडेलका अनुसार साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी गाईलाई सुत्केरी भत्ता दिन शुरु गरिएको हो ।
चर्को पार्किङ शुल्क लगाएपछि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी नेपाल भित्रिन छाडे
भीमदत्तनगर । भीमदत्त नगरपालिले चर्को पार्किङ शुल्क लगाएपछि भारतीय नम्बर प्लेटका चारपाङ्ग्रे सवारी साधन आजदेखि नेपाल भित्रिएका छैनन् ।
जाजरकोट । अविरल वर्षापछि घरमाथिबाट आएको पहिरोले घर पुर्दा जुनीचाँदे गाउँपालिका–६ गर्खाकोट छिर्कमा घरमा सुतिरहेका दुईजनाको मृत्यु भएको छ भने तीनजना घाइते भएका छन् ।
डा. गोविन्द केसीलाई भारतमा गान्धीको उपमा
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै २१ दिनदेखि आमरण अनशनरत चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको पक्ष र विपक्षमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणी भईरहेको छ । जुम्लामा अनसनरत केसीलाई हिजो मात्रै स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि काठमाडौं ल्याइएको छ । देशभरका विभिन्न ठाउँमा उनको पक्षमा आन्दोलन भइरहेको छ ।
भरतपुर अाँखा अस्पताललार्इ पाँचसय थान चस्मा सहयाेग
चितवन । क्यानडाको टोरण्टो शहरस्थित लिसाइड सेन्टिनियल लायन्स क्लबले भरतपुर आंँखा अस्पताललाई ५ सय थान चस्मा सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ ।
विद्युत पुगेपछि गाउँकाे नाम 'कुलमान घिसिङ चाेक'
झापा । झापाको दुई नगरपालिकाको बीचमा अवस्थित एक गाउँको नाम ‘कुलमान घिसिङ चोक’ नामाकरण गरिएको छ ।
सल्लाकाे खाेटाे बेचेर लाखाैँ अाम्दानी
बागलुङ । बहुउपयोगी सल्लाको खोटो बेचेर यहाँका सामुदायिक वनका उपभोक्ता समूहरूले लाखौँ आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
गार्इलार्इ सुत्केरी भत्ता दिदैँ रत्ननगर नगरपालिका
चितवन । रत्ननगर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षबाट गाईलाई सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम शुरु गरेको छ ।
बालाजुबाट सुनसहित श्रेष्ठ पक्राउ
काठमाडौं । बालाजुस्थित गंगाहल नजिकबाट स्रोत नखुलेको सुनको गहनासहित एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा धरान नगरपालिका–१ घर भएका २४ वर्षीय आशिष श्रेष्ठ छन् ।